Calaamadaha jaceylka dhabta ah. - Fox Articles
Home/Talooyin iyo Tusaalooyin/Calaamadaha jaceylka dhabta ah.
Calaamadaha jaceylka dhabta ah.
David 2 weeks ago	Talooyin iyo Tusaalooyin
Daraasaddo dhawr ah oo xiriir ah oo ay sameeyeen xeel dheerayaasha arrimaha Jacaylku ayaa shaaciyay Astaamaha Gaarka u ah ee lagu garto qofka jacaylka dhabta ah uu hayo ama uu halleelo, taas oo aad ku garan karto haddii aad isku aragto astaamahan in Jacayl dhab ahi ku hayo.
1- Qofkada dhabta ah wax u jeceli waxa uu u ilaaliyaa una sharfaa lamaanaha kale ee uu jecel yahay si ka badan sida uu u daryeelo naftiisa.
2- Lamaanaha aad sida dhabta ah u jeceshahay waxa uu noqdaa ka u danbeeya ee aad ka fikirto habeenkii iyo ka u horeeya ee aad ka fikirto subaxii.
3- Qofka Jacaylka rasmiga ahi heleelaa si dhab ah ayuu u ilmeeyaa una ooyaa mar kasta oo uu xasuusto lamaanaha uu u jecel yahay.
4- Mar kasta oo uu soo dhaco Tilifoonkiisu qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu aad u door bidaa in uu noqdo codkii lamaanaha uu sida dhabta ah u jeclaa.
5- Mar kasta oo uu soo galo qol ay dad badani ka buuxaan waxa uu ka baadi doonaa oo uu indhaha la raacaaa in uu indhaha qac ku siiyo muuqaalka aragtida lamaanaha uu jecel yahay, Isaga/Iyada.
6- Hadii uu ogyahay halka uu joogo Lamaanaha uu jecel yahay masaafaday doonto ha jirtee wuu u boholyoobaa waanu u tagtaa.
7- Hadii Lamanaaha aad jeceshahay uu la socdo rag ama dumar kale, waa inuu muuqaalkiisu ama muuqaalkeedu uu si gaar ah kaaga soocnaadaa bidhaan ahaan masaafo durugsan kuwa kale.
8- Marka uu ku soo eego Lamaanaha aad jeceshahay ee ay indhihiinu is qabtaan waad naxdaa, garaaca wadnahaaaguna si aan caadi ahayn ayuu u sii kordhaa.
9- Mar kasta waad ka fikirtaa, wax kasta oo aad aragtaa way ku xasuusiyaan jecaylkiisa ama jacaylkeeda, waxaanad jeceshahay hadal haynta iyo warka Lamaanaha aad jeceshahay, iyo maqalka codkiisa ama codkeeda iLbiriqsi kasta.
10- Qofka jecaylku biyo dhigaa kuma dhiirado in uu si caadi ah ula hadlo Lamaanaha uu jecel yahay, mar kasta oo uu la hadlana waxa uu dareemaa firka nax saa’id ah kalgacal awgii.
12- Meel kasta, xilli kasta, iyo wax kasta oo uu qabanayo Qofka wax jeceli waxa qalbigiisa ka dhex guuxa lamaanaha uu sida runta u jecel yahay.
13- Qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu bilaabaa dhegaysiga heesaha iyo miyuusiga dabacsan ee ay ku jiraan erreyada macnaha leh ee ku dhibca Qalbiga ee ku saabsan qiimaha, qadarinta iyo xushmada Jacaylka.
14- Qofka sida dhabta ah wax u jeceli waxa uu mar kasta door bidaa in uu ka maqlo lamaanaha kale ee uu jecel yahay in uu ka bareero jacaylka oo uu ku yiraahdo waan ku jecelahay.
15-Hadii uu ku hayo Jacayl dhab ahi aragtida indhahaaga iyo qalbigaaga waxa aad ku lamaanaysaa Lamaanaha aad sida xaqiiqda ah u jeceshahay, mar walbana waxa aad jeclaataa ilaa xad ag joogiisa, muuqiisa, codkiisa iyo sheekadiisa.
16- Uma quuro Qofka wax jeceli lamaanaha uu jecel yahay been, khiyaamo iyo quursi, guusha horumarka noloshiisana waxa uu arkaa isaga oo hanta ku guulaysiga kasbashada Jacaylka Lamaanaha uu Jecel yahay.
17- Qofka wax jeceli dhamaan astaamaha midabyada bilicdasan ee ugu quruxda iyo udgoonka badan Kownka sida Ubaxyada waxa uu ku taxaa Qoor gashi uu u hibeeyo in uu qoorta u suro Lamanaaha uu sida dhabta ah u Jecel yahay.
#Fadlan share dheh mahadsanid
Previous Ereyo Jaceyl Oo Romantic Ah
Next 6 Waxyaabo aadan ka ogeyn Ganacsatada Forex 2021
Tushka Daanka Sidaan Kusameeso
Kusoo dhawaw hadii aad dooneyso inaad yeelato tushka daanka sidaan fudud samee oo talaabada sameeneso …
Chase Bank Notary: 4 Vital Types Of Notary You Must Know